नयन सुनुवारको रहस्यमय मृत्यु – Radio One
माघ – २१
रेडियो वान ९२.३ मेगाहर्ज
रामेछापको गोकुलगंगा गाउपालिका-३ रस्नालु,बुर्केको नयन सुनुवारको गए राती रहस्यमय मृत्यु भयको छ।
१४ बर्षिय नयनले आफ्नै कोठामा झुण्डीयर रहेको मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। उनि कक्षा-८ मा अध्ययनरत बिद्यार्थी गोकुलगंगा मा.बी.का छात्र हुन्। आफ्नो विद्यार्थीको मृत्यु प्रति शोक ब्यक्त गर्दै आज विद्यालयले पठन पाठन पनि पूर्ण रुपमा बन्ध गरेको छ।
कलिलै उमेरमा आफ्ना प्राण गुमाउने नयन सधै रमाइलो स्वभावका अति हासी खुसि समय बिताउने स्वभावका थिय। नृत्य गर्न अत्ति रुचाउने नयन परिवारका कान्छो छोरो हुन्। ३ नं वडाका वडा अध्यक्ष श्री नरबिक्रम कार्कीका भनाइ अनुसार अहिले सम्म मृत्युको कुनै पनि ठोस कारण पत्ता लागेको छैन। मानसिक तथा व्यक्तिगत तनाब र गरिबीनै मुख्य कारण हुने बताए। उनि निम्न बर्गीय परिवारका सदस्य पनि हुन्।
नयनको मृत्युको खबर सुन्ने बितिकै अपत्यारिलो घटना भन्दै विधालयका उनका साथीहरु गह भरि आशु पार्दै मृतक प्रति सोक अर्पण गरेकाथिय।
बिद्यालय जादा साथीहरुको झोला बोकी दिने सहयोगी नयन अब सदाको लागि रहेन। कसै कसै साथीको भनाइ अनुसार हिजो दिन भरिनै नयन रोइरहेको थियोरे। उनका सब पोस्टमार्टम को लागि जिरी अस्पताल जिरी,दोलखामा लागिएको छ।
गोकुलागंगा मा.बि. एबम रस्नालु गाउपरिषर उनको मृत्युले सन्नाटा छाएको छ।
मृत्युको बारे कुनै कारण अहिले सम्म पत्ता लागेको छैन। स्थानीय प्रहरी प्रसाशन गाउपलिकाका पालिका अध्यक्ष,राजनीतिज्ञ,समाज सेवी तथा छरछिमेकी सबैजना उनको मृत्युको अनुसन्धानमा जुटेका छन्। यो समाचार सम्प्रेसनको समय सम्म उनको सब पोस्टमार्टम बाट फर्किएको छैन। थप जानकारी आउन बाकीनै छ।
Previous PostPrevious उपचारको क्रममा मेरमान बि.क.को मृत्यु !!!
Next PostNext सहिद बिष्णु कार्की(पुकार) को सम्झनामा खेलाइएको स्मृति फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न